N'ogbe BT-303 Polycarboxylate Superplasticizer 40% (Super ngwa ngwa ntọhapụ slump retaining ụdị) ụlọ ọrụ na-emepụta | Gaoqiang
BT-303 bụ ọgbọ ọhụrụ nke na-ahapụ ngwa ngwa ma na-ejigide mmanya na-egbu egbu sitere na TPEG site na polymerization na-agbanwe agbanwe n'efu, a na-ewebata otu ọhụụ na-ahapụ ntọhapụ n'ime njikọ. N'okpuru alkaline ọnọdụ nke ihe, onye na-adịghị-atọhapụ otu na molekụla ihe owuwu nke ngwaahịa a nwere ike jiri nwayọọ hapụ ndị otu na dispersive ọrụ, na-egwu ọrụ nke na-aga n'ihu na-achụsakwa ciment, iji nweta ọrụ nke igbochi ihe slump ọnwụ .Ọ nwere obere mmiri Mbelata ọnụego, ma ọ nwere nnọọ elu slump nchedo arụmọrụ. A na-ejikarị ya eme ihe n'ụzọ dị elu na ihe ndị dị elu maka arụmọrụ nchedo arụmọrụ, a na-ejikwa ngwaahịa ya n'ọtụtụ ebe na-agbapụta ihe, nke na-eme ka onwe ya na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na nke azụmahịa maka nnukwu ụgbọ okporo ígwè, awara awara, hydro-power na nnukwu ọrụ injinịa ndị ọzọ.
1.With ibu elu slump arụmọrụ, nwere ike ka ihe slump 2h na-enweghị ọnwụ
2.Low mmiri Mbelata ọnụego adịghị n'ozuzu na-eji naanị, ọ chọrọ ka a jikọtara na mmiri Mbelata ụdị nne mmanya.
3.With obere viscosity na thixotropy, ọ ka mma maka ihe nwere mmiri ciment dị ala
Oge ntọhapụ dị nwayọ karịa nke BT-302, n'ozuzu mgbe elekere 1 gasịrị (na mgbanwe nke ihe eji eme ihe, a ga-enwe flufọdụ mgbanwe).
Ọdịdị mmiri odo odo
Njupụta (g * cm3) Ogbe 1.02-1.05
PH Uru 6-8
Ọdịnaya siri ike 40±1
Senti fluidity MM 270mm kwa Oge awa
Mmiri na-ebelata Rate 5%
oke obara obara 0%
Nrụgide ọbara ọgbụgba 30%
Ọdịnaya Ikuku 3%
3D Compressive ike ruru 190MPa
7D Compressive ike ruru 170MPa
28D Ngwunye ike ike 150Mpa
1.Ngwa maka nhazi nke ike oge mbu, ihe azu azu, ihe ndi ozo, ihe nkedo, ihe ndi ozo, ihe ndi mmadu na-aru, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo na ihe ndi ozo. na premix nkedo na ebe, karịsịa maka ihe azụmahịa dị ala.
Enwere ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ ụzọ ụgbọ oloko dị elu, ike nuklia, nchekwa mmiri na ọrụ hydro-power, ụzọ ụgbọ oloko, nnukwu Bridges, awara awara, ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri na mba ndị ọzọ buru ibu na nnukwu ọrụ.
3. Na ọdabara nile di iche iche nke ulo oru na obodo ewu na azụmahịa ihe inggwakọta ụgbọ.
1.This ngwaahịa a colorless ma ọ bụ ìhè odo mmiri mmiri. Usoro onunu ogwu：Ọtụtụ mgbe ，iji 0-30% nne na-aba n'anya na mbenata mmiri nne na-aba n'anya, na mix ndị ọzọ obere ihe na-eme ka mmiri na-ebelata gị n'ụlọnga. Onu ogwu nke ihe na-eme ka mmiri belata bụ n'ozuzu 1% ~ 3% nke ngụkọta nke ihe simenti.
2.Tupu i jiri ngwaahịa a ma obu gbanwee udi na akwa nke ciment na gravel, odi nkpa iji meziwanye simmenti na gravel. Dị ka ule ahụ si dị, chepụta nkezi nke ihe na-ebelata mmiri gị n'ụlọnga
3.This ngwaahịa nwere ike otu eji (emekarị ọ na-enweghị ike iji na-alụbeghị di) Ọ nwere ike na-achọkwa na mmiri na-mbenata nne mmanya na ka retarding nne mmanya iji belata ihe slump ọnwụ. Ma ọ bụ onyinye na-enyere aka iji nweta admixtures na retarder / mmalite ike / antifirizi / pumping ọrụ. Ekwesịrị ikpebi usoro ntinye na ọnọdụ site na ịnwale na teknụzụ mejupụtara
4.This ngwaahịa ike ga-eji ọnụ na ndị ọzọ dị iche iche nke admixtures dị ka n'oge ike gị n'ụlọnga, ikuku entrainment gị n'ụlọnga, retarder, wdg, na a ga-anwale tupu ojiji. Anaghị agakọ na naphthalene usoro mmiri reducer.
5.Concrete ciment na mix ruru kwesịrị kpebisie ike site ule, Mgbe eji, agwakọta na tụrụ mmiri ga-atụkwasịkwara ma ọ bụ kwukwara na ihe igwekota n'otu oge. Tupu iji, inggwakọta ule kwesịrị rụrụ iji hụ na àgwà nke ihe
6.When e nwere nọ n'ọrụ admixtures dị ka ada uyi na slag na ruru nke ihe, ego nke mmiri-mbenata gị n'ụlọnga kwesịrị gbakọọ dị ka ngụkọta ego nke sikwuo ihe.
Nchekwa: Echekwara ya na ụlọ nkwakọba ihe ventilated nke 2-35℃ na ngwugwu akpọrọ, na-enweghị ịtọghe, ndụ adịghị adị otu afọ. Chebe site na ìhè anyanwụ na oyi
Nke gara aga: BT-302 Polycarboxylate superplasticizer 40% (High slump retaining ụdị)
Osote: Polycarboxylate Superplasticizer ntụ ntụ
Polycarboxylate Dabere Superplasticizer
Typedị Polydị Polycarboxylate Superplasticizer .dị